मौसमका कारण साढे ३ घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द - समाचार - कान्तिपुर समाचार
मौसमका कारण साढे ३ घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द
भिजिबिलिटी कम भएपछि फ्लाई दुबईको विमान लखनऊ डाइभर्ट
मंसिर १८, २०७८ सुरज कुँवर
काठमाडौँ — हुस्सुका कारण बिहान ६ बजेदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९:२३ बजेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । विमानस्थलमा रहेको टर्मिनल ड्युटी अफिस टीडीओ) का अनुसार साढे ३ घण्टा हाराहारी विमानस्थल बन्द हुँदा कम्तीमा आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरामाथिको आकाशमा होल्डमा परे भने दुबईबाट आउँदै गरेको फ्लाई दुबईको जहाज भारतको लखनऊ डाइभर्ट भयो ।
बिहान ९:२३ अघि काठमाडौं विमानस्थलको भिजिबिलिटी ८ सय मिटरभन्दा कम थियो । काठमाडौंबाट जहाजलाई बाहिर निस्किन कम्तीमा ८ सय मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । भिजिबिलिटी कम भएका कारण साढे ९ बजेसम्म काठमाडौंबाट आन्तरिक उडान पनि हुन सकेनन् ।
टीडीओ कार्यालयका अनुसार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न आन्तरिक उडानमा रहेका विमानका लागि १ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जेट विमानका लागि ११ सय मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । काठमाडौंमा हाल दैनिक ५० वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र ३ सय हाराहारी आन्तरिक उडान (आउने–जाने) हुन्छन् ।
यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको जवाद नामको सामुद्रिक चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
विभागका अनुसार सो चक्रवात शनिबार बिहान ओडिसाको तटीय क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसपछि उत्तर पूर्वतर्फ सर्ने देखिएको छ । उक्त चक्रवातका कारण नेपालमा शनिबार रातिबाट प्रदेश नं १, प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागहरूका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १०:५२
बास बस्दै बस्दै नेपाल
पछिल्लो समय विकास भएको जेनेटिक (आनुवंशिक) अध्ययनले आधुनिक मानवका पुर्खा अफ्रिकाबाट विश्वभरि फैलिएको प्रमाणित गरेको छ । हाम्रा पुर्खा चीन र भारततिरबाट नेपाल आइपुगे । त्यसरी बसाइा सर्दै आएको मौखिक इतिहास नेपालका थुप्रै जातजातिमा सुरक्षित छ । मौखिक इतिहासले गर्ने त्यो संकेत र जेनेटिक अध्ययनले दिएको निचोडका आधारमा कुन जाति कहााबाट कहिले नेपाल आइपुग्यो— अध्येता भोगीराज चाम्लिङले खुट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
मंसिर १८, २०७८ भोगीराज चाम्लिङ
एउटा सुखद संयोगबाट विषय प्रवेश गरौं । भारतीय सेनाबाट अवकाश लिएर घर फिरेपछि ओखलढुंगाका बुद्धिकुमार ह्वङ्गुलाई आफ्ना जातीय संस्कारहरूमा सहभागी हुन समय मिल्यो । नत्र बिदामा घर आयो, फर्किहाल्यो मात्रै हुन्थ्यो ।
भारतीय सेनामा छँदा जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा लामो समय ‘ड्युटी’ मा खटिनुपरेकाले त्यहाँको भूगोलसँग उनी राम्रै परिचित थिए । कस्तो अचम्म भने बायुङ (बाहिङ) राईहरूको पाँच दिने पितृसंस्कार ‘सेग्रो’ गर्दा वाचन गरिने मुन्दुममा ‘जम्मुमा लाम’, ‘जोजिला लाम’ भनेर खुद आफैं पुगेको जम्मु र जोजिला पहाडको उल्लेख भइरहेको ! मनमा गहिरो जिज्ञासा पैदा भयो, ‘यो पितृकार्य गर्ने नक्सो न त्यहाँ पुगेको छ, न उसलाई त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा छ । मुन्दुममा कसरी ती ठाउँहरूको नाम आयो ?’ त्यसपछि बुद्धिकुमारले विभिन्न संस्कारहरू गर्दा ध्यानपूर्वक मुन्दुम सुने, मनमा गुने र संकलन पनि गरि किताब प्रकाशन गरे– ‘किरात बाहिङ (बायुङ) तुम्लो’ (२०६९) ।
यो किताब पढेपछि फेरि म पनि अचम्ममा परेँ । त्यहाँ जम्मु र जोजिलाको मात्रै कुरा थिएन, बुद्धिकुमारले नै चिन्न नसकेको थप दुई हिमाली नाका (घाँटी) हरूको पनि कुरा थियो– पैतिप लाम र खैबर लाम । ‘लाम’ अर्थात् बाटो । ‘खैबर’ चाहिँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सिमानामा पर्ने हिमाली नाका हो । मेरो अनुमानमा ‘पैतिप’ भनेको अहिले पारपिक भनेर चिनिने चीन र भारतबीचको हिमाली सीमा–नाका हो, जुन कश्मीरभन्दा अझै उत्तरमा पर्छ । भन्नुको अर्थ हो, उहिले नै हाम्रा पुर्खाहरू ती नाकाहरूबाट हिँडेका थिए ।
यो कुराले निश्चय नै चाम्लिङ राईहरूमा ‘वाइको’ (पानीमा बस्ने पुर्खाहरूको पूजा) मुन्दुममा उल्लेख हुने ‘योंला’ भनेर सिन्धु नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यतालाई संकेत गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्कलाई थप बल पुग्यो । किनभने जम्मु र खैबरभन्दा दक्षिणतर्फ पर्छ– मोहनजोदाडो र हरप्पा । यसमा थप बल फेरि बायुङ
(बाहिङ) राईहरूको मुन्दुमले नै दिएको छ । लोकबहादुर राईका अनुसार, ‘सेग्रो’ गर्दा मुन्दुममा ‘मोहनझाडी’ को उल्लेख हुन्छ । सम्भवतः मोहनझाडी भनेको अहिलेको मोहनजोदाडो हुनुपर्छ, जुन खस–नेपाली भाषासँग संगत बढेपछि अपभ्रंस भएर ‘मोहनझाडी’ बन्न पुग्यो । तर, सिन्धुघाँटीको सभ्यता किरात पुर्खाहरूले विकास गरे भन्ने मेरो तर्क होइन । सिन्धुघाँटीको सभ्यतासँग किराती पुर्खाहरू राम्रै परिचित थिए र अन्तरघुलन भएका थिए भन्ने तर्क हो मेरो ।
जे होस्, मुन्दुम संकलन र अध्ययनमा लागेपछि यस्ता थुप्रै ‘अचम्म’ सँग जम्काभेट भइरहेको छ । सन्दर्भवश आएका यी विषय यहीँ छोडिदिऊँ । र, नेपालका विभिन्न जातिको मौखिक ज्ञान–परम्परामा उल्लेख हुने आदिम बसाइँसराइ र प्राग्ऐतिहासिक थातथलोबारे आनुवंशिक (जेनेटिक), पुरातात्त्विक तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययनबाट प्राप्त निचोडहरूसँग दाँज्नतिर लागौं ।
अहिले आनुवंशिक (जेनेटिक) अध्ययनले कोष (सेल) मा हुने डीएनए (डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड) केलाएर मान्छेहरूको सुदूर विगतबारे बताउँछ । प्राचीन हाडका अवशेषहरूबाट समेत डीएनए निकालेर अध्ययन गरिन्छ, जसले प्राग्ऐतिहासिक मानवबारेको अध्ययनलाई झन् फराकिलो बनाइदिएको छ ।
हाम्रो शरीरमा मातृवंश र पितृवंशबाट प्राप्त डीएनए हुन्छ । मातृवंशबाट प्राप्त डीएनएलाई ‘मिटोचोन्ड्रियल’
(एमटी) डीएनए र पितृवंशबाट प्राप्त डीएनएलाई ‘वाई क्रोमोजोम’ भनिन्छ । अफ्रिकीहरूमा पाइने मातृवंशीय डीएनए विश्वका सबै आधुनिक मानवमा पाइएकाले अफ्रिकाबाट आधुनिक मानवहरू संसारैभर फैलिएका हुन् भन्नेमा विद्वान्बीच मतैक्यता छ । अफ्रिकामा पाइने त्यो मातृवंशीय डीएनएको उमेर लगभग २ लाख वर्ष पुरानो देखिएकाले (पिटर बेलवुड, द ग्लोबल प्रिहिस्ट्री अफ् ह्युमन माइग्रेसन, २०१५) आधुनिक मानवका पुर्खाहरू बढीमा २ लाख वर्षपहिले अफ्रिकाबाट बाहिर जान थालेको र लगभग १ लाखदेखि ७०–८० हजार वर्षअघिसम्म त्यो क्रम निरन्तर चलेको विद्वान्हरूको मत छ (डेबिड रेच, हाउ वी आर एन्ड हाउ वी गट हिअर, २०१८) ।
त्यही क्रममा अफ्रिकाबाट आधुनिक मानवका पुर्खाहरू चीनमा ८० हजार वर्षभन्दा पछि आइपुगे भनिन्छ । किनभने अफ्रिकामा ८० हजार वर्षअघि विकास भएको डीएनए अहिलेका चिनियाँहरूमा पाइन्छ (एलिस रोबर्ट्स्, द इन्क्रेडिबल ह्यमुन जर्नी, २०१०) । त्यही क्रममा भारतमा आधुनिक मानव होमो सेपियन्सका पुर्खा लगभग ८० हजार वर्षअघि आइपुगेका थिए । त्यस्तै दोस्रो समूह ५० हजार वर्षअघि आइपुगेको थियो (टोनी जोसेफ, अर्ली इन्डियन्स, २०१८) । चीन र भारत आइपुगेका तिनै आधुनिक मानवका पुर्खाहरू बसाइँसराइका क्रममा नेपाल आइपुगेका हुन् भनिन्छ ।
बिङ सु (सन् २०००) सहितले गरेको आनुवंशिक अध्ययनले नेपालका भोट–बर्मेलीभाषीहरू चीनको ह्वाङहो
(यल्लो रिभर) नदीबाट फैलिएको देखाएको छ । त्यस अध्ययनले भन्छ– हालका चिनियाँ–तिब्बती मूलका मान्छेहरूको पुर्खा १० हजार वर्षपहिले ह्वाङ–हो नदी उपत्यकामा बस्थ्यो । क्याभाल्ली–स्फोर्जा र पियज्जाले गरेको पुरातात्त्विक अध्ययन तथा वाङले गरेको भाषाशास्त्रीय अध्ययनले अहिलेका चिनियाँ र भोट–बर्मेली छुट–भिन्न भएको लगभग ६ हजार वर्ष मात्रै हुँदै छ ।
अहिलेका भोट–बर्मेली भाषीहरूका पुर्खा ह्वाङ–हो नदी छोडेर पश्चिमतर्फ लागे । त्यहाँबाट फेरि दक्षिणतिर मोडिएर हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्न थाले । सम्भवतः प्राग्ऐतिहासिक बसाइँसराइका क्रममा झाङ
(तिब्बत)–मेन कोरिडरको बाटो पछ्याए । भोट–बर्मेली भाषा परिवारभित्र पनि ब्यारिक समूह भनेर चिनिनेहरूचाहिँ हिमालबाट अझ दक्षिणतर्फ लागेर भुटान, नेपाल, उत्तर–पूर्वी भारत र उत्तरी युन्नानमा बसोबास गरे
(वाङ, सन् १९९४) ।
जर्ज भानड्रिमले चाहिँ फरक मत राख्दै नेपाल प्रवेश गर्ने भोट–बर्मेली भाषीहरूको आदिम भूमि याङ्जी नदीले सिञ्चित गरेको सिचुवान हो भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । जर्जका अनुसार, त्यहाँबाट उनीहरू ह्वाङ–हो नदीको उब्जाउ मैदानमा आए । त्यहाँबाट तिब्बत, कश्मीर हुँदै नेपालका पहाडहरूमा र भारतका सिक्किमलगायत क्षेत्रमा आइपुगे (टिबेटो–बर्मन भर्सेज इन्डो–चाइनिज) । भोट–बर्मेलीभाषीका पुर्खाहरू ह्वाङ–हो कि याङ्जी नदीको उपत्यकाबाट नेपाल आइपुगे भन्ने विषय बिस्तारै निचोडमा पुग्ने नै छ । अहिलेलाई चाहिँ यति भनिराखौं– नेपाल भनेको चीन र भारत दुईतिरबाट आएका आधुनिक मानवहरूको जम्काभेट भएको एउटा थलो हो ।
पछि के होला भन्न सकिन्न, तर अहिलेसम्मको आनुवंशिक अध्ययनका आधारमा भन्ने हो भने नेपाल प्रवेश गर्ने सबैभन्दा प्राचीन जाति तामाङ हो । तेन्जिन गेइदेन (सन् २००७) सहितको समूहले गरेको अध्ययनले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । तिब्बतबाट १५६, काठमाडौंका तामाङबाट ४५, नेवारबाट ६६ र पुराना बासिन्दाबाट ७७ गरि ३४४ जनाको रगत नमुना संकलनपश्चात् गरिएको अध्ययनपछि उनीहरू यस्तो निचोडमा पुगेका हुन् ।
तेन्जिन गेइदेनहरूको अध्ययनले नेवारहरूको डीएनएमा भारतीयहरूको अंश ४० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । आश्चर्य नेवारहरूको छिमेकी भएर पनि तामाङहरूमा भने भारतीय डीएनए शून्य देखिएको छ । बरु तामाङमा भोट–बर्मेलीभाषीहरूमा पाइने डीएनए ८६.६ प्रतिशत छ । उनीहरूको डीएनए बढीमा १६,४०० र कम्तीमा ५,२०० वर्ष प्राचीन देखिएको छ । त्यस्तै नेवारहरूको डीएनए बढीमा १०,४०० र कम्तीमा ४,८०० वर्ष प्राचीन देखिएको छ । यसको अर्थ हो, तामाङका पुर्खा १६ हजार ४ सय र नेवारका पुर्खा १० हजार ४ सय वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा आइपुगेका थिए ।
नेवार र आर्यहरूको रक्तमिश्रण पछिल्लो चरणसम्म पनि भइरहेको देखिन्छ । जस्तो कि मध्य–एसिया
(कजाखस्थान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान) को मैदानमा बस्ने इन्डो–आर्यहरूको डीएनए काठमाडौंका नेवारहरूमा २५.७ प्रतिशत पाइन्छ, जुन १००० वर्ष मात्रै पुरानो हो ।
अब गरौं कुरा, पूर्वका किरातीहरूको । बैरागी काइँलाद्वारा सङ्कलित ‘लिम्बू मुन्धुम’ (लिम्बू जातिमा कोखपूजा, २०४८) मा एउटा श्लोक छ–
खवालुम् गऽ थाक्पुत माङ्बे
उन्छोन थो मुनाफेन नु
लासा तेम्बे नु
सिन्युक्केन गऽ मुदेन्तेन् नु
सुःसुयुमा के यसुल्ले गऽ
(भावार्थ ः जीवनका रक्षक बूढा–बाजे देवता, आदौमा तिब्बतको लासा हुँदै चीनबाट लसलस हिँड्दै आयौं ।)
यो मुन्दुमले लिम्बू (किराती) का पुर्खाहरू मुनाफेन (चीन) बाट लासा (तिब्बत) हुँदै नेपाल आइपुगेको संकेत गर्छ । त्यस्तै चाम्लिङ मुन्दुममा किरातीहरूको पुर्खा नियामाबाट आएको वर्णन छ । मुन्दुमका रिसिया (श्लोक) मा यस्तो भनिन्छ–
निवामाडा सुर्लुमी, मुबुमी, कुबुमी
हय डयाच्युपा, रुङ्झीच्युपा लिसा कुन्योउ
(स्रोतव्यक्ति ः शिवराज राई)
(भावार्थ ः निवामामा सुर्लुमी, मुबुमी–कुबुमीजस्ता धामीहरू पैदा भए । अगेना पुज्ने र अजिङ्गर पुज्नेहरू पैदा भए ।)
आसो नियामाडा लुडाको वाबुरी छिबुरीडा
आसो नेवाचा/निवाचा, धिरिचा, टाम्माचा निवावासिमङोम्
(स्रोतव्यक्ति ः कम्पध्वज राई)
(भावार्थ ः अब नियामामा उम्रिएको चिन्डोमा नियामामै फलेको सबैभन्दा पुरानो अन्न सायुङ्मा (कागुनी) र धानको जाँड राखेका छौं है पितृहरू ।)
यी दुई रिसियाबाट नियामाबारे चार कुरा स्पष्ट हुन्छ– नियामामा छँदा नै धामीप्रथा सुरु भएको थियो, चुला पूजा सुरु भएको थियो, अजिङ्गरको पूजा हुन्थ्यो र कागुनी खेती हुन्थ्यो । अरु कुरा नगरी खालि अजिङ्गर पूजा र कागुनीकै कुरा गरौं । चीनमा अजिङ्गर पूजा हुन्छ, अजिङ्गरको देश नै भनिन्छ भन्ने सर्वविदितै छ । त्यस्तै ह्वाङ–हो नदी उपत्यकामा १० हजार वर्षपहिले विश्वमै सर्वप्रथम कागुनी खेती सुरु भएको पुरातात्त्विक अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, कागुनीलाई चिनियाँ भाषामा ‘फ्रें’ भनिन्छ, चाम्लिङ राई भाषामा ‘फेंरो’ । किरातीहरूमा पितृहरूलाई चढाउने पवित्र अन्न मानिन्छ– कागुनी । अहिले पनि आदिम मातृ
(उमो) को पूजा गरिने ‘ढ्वाङ्कुमो’ मा वाम्बुले राईहरू कागुनीको भात चढाउँछन् । यी सांस्कृतिक तथ्यले किरातीलाई ह्वाङ–हो नदीमा विकास भएको सभ्यतासँग सम्बन्धित देखाउँछ, जुन आनुवंशिक र पुरातात्त्विक अध्ययनले पनि लगभग प्रमाणित गरेको छ ।
पूर्वी एसियामा नवपाषाण युग १० हजार वर्षअघि सुरु भएको थियो (वाङ, सन् १९९४) । त्यसमध्ये एउटा थियो– ह्वाङ–हो नदीको माथिल्लो र मध्य क्षेत्रमा विकास भएको संस्कृति, जुन याङसाओ संस्कृतिको नामले परिचित छ । यो संस्कृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कागुन र कोदोको खेती हो, जसलाई भोट–बर्मेलीभाषीहरूको संस्कृतिको जननी (आमा) नै मानिन्छ ।
प्राग्ऐतिहासिककालमा नेपालमा आवादीका लागि हिमालयले खेलेको भूमिकाबारे केन्द्रित भएर हुवा–वेई वाङ
(सन् २०१२) सहितले काठमाडौंबाट २०० र पूर्वी नेपालबाट ४६ गरी २४६ जनाको रगतको नमुना संकलन गरे । र, मातृवंशीय डीएनए अध्ययन गरे । त्यस अध्ययनले नेपाली (नेवार र किराती) तथा तिब्बतीको मातृवंशीय वंशाणु (जिन) मा निकै धेरै निकटता रहेको देखायो । अध्ययनबाट के पनि थाहा भयो भने भोट–बर्मेलीभाषी नेपालीमध्ये वंशाणु (जिन) मा ह्याप्लोग्रुप (जी टु ए टु) भएकाहरू ५,७०० र अर्कोथरि ह्याप्लोग्रुप
(एम नाइन ए वान ए टु ए) भएकाहरू ६,००० वर्षपहिले नेपाल आइपुगेका थिए । त्यस अध्ययनले किरातीहरू लगभग ६ हजार वर्षअघि नेपालका पूर्वी पहाडहरूमा आइपुगेका थिए भन्ने देखाउँछ ।
यी तथ्यहरूसँग जोडेर यसो भन्न सकिन्छ– किरातीका पुर्खाहरू चीनको नियामाबाट हिँड्न सुरु गरे । पैतिप
(पारपिक) नाका पार गरी दक्षिणतर्फ लागे । त्यसपछि जोजिला, जम्मु, खैबरतिर पुगे । त्यहाँबाट सिन्धु नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता (योंला) को मोहनजोदाडो हुँदै गंगा मैदान आइपुगे । र, नेपालको तराईबाट सप्तकोसी तरी पहाड उक्लिए । यद्यपि यसबारे विस्तृत अध्ययन भने जरुरी छ ।
मौखिक शास्त्र ‘पेताँ ल्हुताँ/लुताँ’ (पेदा लुदा) ले भन्दोरहेछ– गुरुङहरूको पुर्खा ‘कोकोली माह्रस्यो’ बाट आएका हुन् । त्यो उनीहरूको आदिम उत्पत्तिस्थल भएकाले मरेपछि सातो (हंस) पहिले त्यहाँ पुग्छ भन्ने विश्वास छ । ‘कोकोली माह्रस्यो’ भनेको अहिलेको चीनको कोको नोर (चिन्हाई) ताल हो भन्ने विश्वास गुरुङहरूमा छ । मौखिक शास्त्रले गुरुङहरूका आदिम पुर्खाहरू ‘कोको नोर’ ताल क्षेत्रको चों इलाकाबाट तिब्बत हुँदै नेपाल आइपुगेको बताउँछ (डिल्लीजङ तमु, तमु जातिको इतिहास, २०७१ ! सुदर्शन तमु ‘घान्द्रुके’, तमु गुरुङ इतिहास, २०७१) । कोको नोर विशाल ताल हो, जसको लम्बाइ १०५ किलोमिटर, चौडाइ ६५ किलोमिटर छ । पानी भरिँदा यो तालले ६,००० वर्ग किलोमिटर र घट्दा ४,२०० वर्ग किलोमिटर भू–भाग ओगट्छ (ब्रिटानिका डट कम() । यसको भव्यताले आदिम समयमा तालवरिपरि पक्कै मान्छे बसोबास गर्थे भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
हालै चीनबाट आनुवंशिक अध्ययनमै पीएचडी गरेका टेक गुरुङले यो अनुमानलाई प्रमाणित गरेका छन् । उनले चीनको युन्नान र नेपालका गुरुङ, मगरहरूको पितृवंशीय डीएनएबीच तुलनात्मक अध्ययन गरे । आजका मंगोलियनहरूसँग २६.३ प्रतिशत, युन्नानका नासी, इलगायत जातिसँग ३४.२६ प्रतिशत र अहिले तिब्बती भनेर चिनिनेहरूसँग १५ प्रतिशत डीएनए मिल्न पुग्यो । समग्रमा मंगोल, चिनियाँ–तिब्बतीहरूसँग गुरुङहरूको डीएनए ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मिल्दोरहेछ । अन्य विद्वान्ले गरेका आनुवंशिक अध्ययनसँग तुलना गरी डा. गुरुङले निकालेको निचोड छ– गुरुङका पुर्खाहरू करिब ८,००० वर्षअघि कोकोनोर ताल क्षेत्रवरिपरि थिए, करिब ६,००० वर्षअघि दक्षिण–पश्चिम चीनको युन्नानतिर आइपुगे, करिब ५,००० वर्षअघि तिब्बत (लोखा) तिर थिए । र, करिब ३००० वर्षअघि मुस्ताङ आइपुगे ।
गुरुङका पुर्खाहरू मुस्ताङ आइपुगेको कुराचाहिँ पुरातात्त्विक र आनुवंशिक अध्ययनमै आधारित भएर भनिएको हो । मुस्ताङका गुफाहरूमा मान्छेका आठवटा दाँत फेला परेका थिए । चुङओन जिओन (सन् २०१६) लगायतको समूहले आनुवंशिक अध्ययन गर्दा ती दाँतमध्ये चोखोपानी गुफाबाट प्राप्त दाँत बढीमा ३,१५० र कम्तीमा २,४०० वर्ष प्राचीन देखियो । र, त्यो दाँतको वंशाणु तिब्बती, युनानका नासी, इ जातिसँग धेरै मिल्दो देखियो । तिब्बती तथा नासी, इ जातिसँग गुरुङहरूको पनि वंशाणु मिल्ने भएकाले चोखोपानीमा फेला परेको दाँत गुरुङका पुर्खाहरूको हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । फेरि ‘पेताँ लुताँ’ ले पनि मुस्ताङलाई नै गुरुङहरूको पहिलो थलो मानेको छ (तमु जातिको इतिहास, २०७१) ।
इतिहासकार बाबुराम आचार्यका विचारमा थारूहरू पनि किरात नै हुन् । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ कोसी नदीको जलप्रवाहसम्म फैलिने क्रममा घना जंगलमा बस्ने आदिवासीहरूलाई ‘स्थानीय’ भन्ने अर्थमा भारतीय आर्यहरूले ‘स्थल’ भनी सम्बोधन गरे । त्यही ‘स्थानीय’ बोधक ‘स्थल’ शब्द प्राकृत भाषामा अपभ्रंस भएर ‘थारू’ बन्न पुग्यो (नेपालको सांस्कृतिक परम्परा, २०५४) । इतिहासकार बाबुराम आचार्यको यो मतलाई आनुवंशिक अध्ययनले पनि प्रामाणिक साबित गरिदिएको छ ।
नेपालका जातजातिमध्ये सबैभन्दा धेरै आनुवंशिक अध्ययन थारूहरूको भएको छ । ती अध्ययनहरूबाट निस्किएको निचोड एकमुष्ठमा यस्तो छ–
एक, थारूहरूको मातृवंश हिन्दु हो भन्ने भनाइको सत्यता परीक्षण गर्न गुइसेप पस्सारिनो (सन् १९९३) सहितले मोरङ र चितवनका थारू तथा चितवन र दिल्लीका हिन्दुबीच तुलनात्मक आनुवंशीय अध्ययन गरेका थिए । त्यसले देखायो– थारूहरूको वंशाणु ७० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वी एसियाली (चीन, जापान, कोरियालगायत) हरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । यसले प्रमाणित भयो– थारूहरूको मातृवंश हिन्दु होइन ।
दुई, ज्ञानेश्वर चौबे (सन् २०१४) सहितले नेपाल र भारतका थारूहरूको आनुवंशीय अध्ययन गर्दा उनीहरूको वंशाणुमा ‘एम फोर थ्री’ ह्याप्लोग्रुप पनि रहेको पत्ता लगाए । यो ह्याप्लोग्रुपलाई दक्षिण एसियाकै सर्वप्राचीन मानिएको छ । यसबाट थारूहरूको रक्तमिश्रण उनीहरूभन्दा अझ अघिका रैथाने बासिन्दासँग भएको थाहा हुन्छ । जे होस्, थारूहरूमा दक्षिण एसियाका सर्वप्राचीन बासिन्दाहरूको वंशाणु (जिन) पनि छ ।
तीन, भारतका उत्तरखण्ड र उत्तर प्रदेशका थारूहरूमा पाइएको डीएनएको स्रोत फरकफरक छ । उत्तर प्रदेशका थारूहरूमा इन्डो–युरोपियन र द्रबिडभाषीहरूमा पाइने वंशाणु बढी छ भने उत्तराखण्डका थारूहरूमा पूर्वी र दक्षिण–पूर्वी एसियाका भोट–बर्मेलीभाषीहरूमा पाइने वंशाणु बढी छ । जस्तो कि उत्तर प्रदेशका थारूहरूमा पूर्वी एसियामा पाइने डीएनए वंशाणु ३.७३ प्रतिशत मात्रै छ भने उत्तराखण्डका थारूहरूमा ५२.९ प्रतिशत पाइन्छ । यसले पूर्वी एसियाबाट फैलिएका जनसंख्यासँग थारूहरूको मिश्रण सघन रहेको देखिन्छ । थारूहरूमा पाइने पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाली वंशाणु तिब्बत हुँदै नेपालबाट उत्तर भारततर्फ फैलिएको हो । त्यसैले अहिले थारूहरू उत्तर भारतसँग नजिक भए पनि उनीहरू उत्तरतर्फको हिमालय क्षेत्रबाट तल ओर्लिएका हुन् ।
चार, थारूहरूमा धेरै जातिको वंशाणु मिसिएको छ । यो तथ्य सिमोना फोर्नारिनो (सन् २००९) सहितले पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराईका थारूहरूको अध्ययन गर्दा स्पष्ट भएको हो । सिमोना फोर्नारिनोहरूले त्यसको कारण मलेरियालाई मानेका छन् । थारुहरूमा मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता भएकाले उनीहरू मात्रै यो क्षेत्रमा टिके, तर अन्य जातजातिका लागि चाहिँ प्राग्ऐतिहासिक कालको त के कुरा गर्नु, ऐतिहासिक कालमै पनि तराई उत्तम मार्ग मात्रै बन्न पुग्यो । यो विषयलाई चाम्लिङ मुन्दुम (शिवराज राई) मा स्पष्टसँग संकेत गरिएको छ– ‘ठारुहों लाम, बाजिहों लाम/साम्भातालैं आबो रोंसा’ (थारुहरूको थलो, वृज्जिहरूको थलो बाँसको धनुकाँड लिएर हिँड्दै छु) । यसरी प्राग्ऐतिहासिक कालमा तराईमा हिँड्ने थुप्रै समूहसँग थारुहरूको रक्तमिश्रण हुन पुग्यो । फोर्नारिनोसहितको अध्ययनले भन्छ– भोट–बर्मेलीभाषीहरू ४,२०० वर्षपहिले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि यस्तो रक्तमिश्रण हुन पुगेको हो ।
खासमा समाजमा जीवित रहेका मिथक र मौखिक ज्ञानहरू इतिहासका कुनै न कुनै यथार्थकै जगमा निर्माण भएको हुन्छ भन्ने मुन्दुम र पेताँ लुताँले संकेत गरेका कुरा पुरातात्त्विक, भाषाशास्त्रीय तथा आनुवंशिक अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । खासमा मानवशास्त्री ब्रोनिस्ल मलिनोस्कीले मिथक विगतको यथार्थबाट निर्माण हुन्छ र मिथक जीवित यथार्थ हो, जुन संस्कार र नैतिकता (आचारविचार) का रूपमा क्रियाशील हुन्छ (सेक्स, कल्चर एन्ड मिथ, १९६२) भनेर सोह्रै आना सही भनेका रहेछन् ।
इतिहासकार बाबुराम आचार्यले आर्यहरू इसापूर्व ७५० (२७५० वर्षपहिले) तिर नेपाल प्रवेश गरेको अनुमान गरेका छन् (नेपालको सांस्कृतिक परम्परा) । नेपालका आर्यहरूको आनुवंशिक अध्ययन नभइसकेकाले यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन । तर, यसमा लगभग सत्यता हुन सक्छ भन्ने अनुमानचाहिँ भारतलगायतमा गरिएका आनुवंशिक अध्ययनबाट गर्न सकिन्छ । आनुवंशिक अध्ययनद्वारा के थाहा हुन आएको छ भने आर्यहरू लगभग ४,१०० वर्ष पहिले कज्जाखस्तानको मैदानबाट हिजोआजको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानमा बसाइँ सरेका थिए । त्यहाँबाट ४,००० देखि ३,००० वर्षबीचमा दक्षिण एसियामा आइपुगेका थिए (टोनी जोसेफ, अर्ली इन्डियन्स, २०१८) । भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्न पक्कै पनि २–४ सय वर्ष लाग्यो भन्ठान्ने हो भने बाबुराम आचार्यको अनुमान लगभग सही देखिन आउँछ ।
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १०:४७